FANADINANA : Hojerena akaiky ny tambin-karama, hoy ny minisitra tompon’andraikitra
Hojerena akaiky ary hovahana haingana ny mahakasika ny tambin-karama tamin’ny Fitsarana fanadinana (Vacation) sy ny fanampiana ny mpampianatra (Subvention), hoy ny minisitra Volahaingo Marie Thérèse mba hampizotra an-tsakany sy an-davany ny taom-pianarana 2019-2020. 22 octobre 2019
Anisany nambarany io nandritra ny famaranana ny hetsika ara-panatanjahantena an-tsekoly tao Toamasina tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo.
Nisy koa ny fihaonana nataon’ny minisitra tamin’ny fianakaviamben’ny fampianarana ao amin’ny Faritra Atsinanana, dia ireo Tale Rezionalin’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika sy ny fampiofanana arak’asa (DRENETP), ireo Sefo Cisco ary ireo Sefo Zap sy Talen-tsekoly ary ny mpampianatra. Nisy ny fifampizarana vaovao teo amin’ny roa tonta. Nohamafisin’ny minisitra nandritra izao fihaonana izao fa ny fidirana ofisialin’ny mpianatra dia amin’ny 28 Oktobra ho avy izao.
Mikasika ny fandraisana mpampianatra vaovao indray, dia nambaran’ny minisitra fa hatao tsy ho ela, saingy hisy ny mason-tsivana amin’izany, ny isan’ireo mpampianatra horaisina ary ny fomba fandraisana mpampianatra mba hangarahara sy hialana amin’ny kolikoly izay nampimenomenona ny mpampianatra maro. Nanome toromarika ho an’ireo Talen-tsekoly sy mpampianatra koa ny tenany, amin’izao fampidirana mpianatra izao, mba tsy hitaky vola amin’ireo Ray aman-dRenin’ny mpianatra amin’ny fampidirana zaza an-tsekoly amin’ny Ambaratonga fototra. Toy izany koa ny fanomanana ny fanadinam-panjakana, izay tsy tokony handraisam-bola velively amin’ny fisoratana anarana amin’izany, afa-tsy ny fanadinana Bakalorea irery ihany.
Mikasika ny mpampianatra Fram indray, dia nolazainy fa ny fifanarahan’izy ireo sy ny Ray aman-drenin’ny mpianatra, dia tsy idiran’ireo Talen-tsekoly. Nanamafy anefa ny minisitra fa hisy ny famindran-toerana hatao amin’ireo tompon’andraikitra sasantsasany. Ho tombontsoan’ny fanabeazana eto amin’ny firenena sy noho ireo fitarainana voaporofo voarain’ny minisitera no anton’izany, raha ny nambarany. Nanentana ireo Ray aman-drenin’ny mpianatra koa ny minisitra, hampiditra ireo ankizy an-tsekoly. Toy izany koa, ho an’ireo mpampianatra mba hahay handray tsara ireo zaza Malagasy.